Warshadaha Jilitaanka Jumlada ee Warshadaha Kordhinta Calaamadaha Gaarka ah ee Gaarka ah | Weiti
Iibiyeyaasha Jumlada ee Kordhinta Indhaha Calaamadaha Gaarka ah
1, Faux mink fidinta indhaha
2, Dhumucda 0.03/0.05/0.06/0.07/0.10/0.12/0.15/0.18/0.20/0.25mm
4, Qalab tayo sare leh iyo farsamada gacanta oo deggan
Amarka muunadda waa la heli karaa.
Astaanta Gaarka ah ayaa la heli karaa. Waxaan aqbalnaa adeegga OEM & ODM.
Qalab tayo sare leh iyo farsamo xasiloon, timuhu ma aha wax dheg dheg ah oo aan hadh lahayn, si sahlan looga saari karo, fududahay in la isticmaalo, qalooca & dhererka saxda ah. 24 saacadood iibka kadib
Dhumucda 0.05m iyo 0.07mm ayaa ah jeedallada ugu badan ee la soo jeediyay, waxaad ku dhejin kartaa ilaa 3 ~ 10 jeedal hal hal karbaash dabiici ah adigoon dhaawicin karbaashka dabiiciga ah.
Noocan karbaashka ah ayaa la duubay kaliya 1/3 ee u dambeeya ee kordhinta, taasoo ka dhigaysa jirka karbaashku mid aad u buuxa oo aad u riwaayad ah.
Waxay leedahay dabacsanaan wanaagsan. xoogga gilgilashada iyo neefsashada. Aad bay u khafiifsan tahay oo u jilicsan tahay
Maaddaama ay ka samaysan tahay faux mink, waa mid aad u khafiif ah waxayna bixisaa midab madow oo saafi ah. Waad ku mahadsan tahay iftiin la'aan, waxay bixisaa muuqaalka dabiiciga ah.
Kordhinta baalasha ayaa dhererka, dhumucda, duubnaanta iyo buuxnaanta ku darto karbaashyada dabiiciga ah, kor u qaadista wiishashka iyo qaabka isha. Iyaga ayaa si gaar ah loogu dabaqayaa saldhigga karbaash kasta oo dabiici ah oo leh xabag.
Tilmaamaha ugu muhiimsan: Indhashareerka taageere ee horay loo sameeyay ayaa gacan ka geysanaya dardar gelinta geeddi-socodka baalasha. Sababtoo ah uma baahnid inaad gacanta ku samaysatid taageere indho -indhe. Taageere -duubkaani wuxuu adeegsadaa isku -dhejinta dhejiska, guntin la'aan, wuxuuna leeyahay saldhig aad u gaaban oo dhuuban oo aan dhaawici doonin indhashareerka dabiiciga ah.
Ku saabsan dhumucda: Qaar ka mid ah fannaaniinta indhaha ayaa sheegaya in 0.05mm iyo 0.07mm ay aad u dhuuban yihiin in la isticmaalo. Si kastaba ha ahaatee, waxay yihiin kuwo jilicsan oo dabiici ah. Ma aha kuwo adag. Dadka qaar ayaa sheegaya in 0.10mm aad u caato tahay, dadka qaarna waxay leeyihiin 0.10mm waa dhumuc weyn laakiin aad bay u adag tahay. Dhab ahaantii, nooc kasta oo baarkooda ah wuxuu leeyahay faa'iidooyin u gaar ah. Tiknoolajiyadda indhaha ayaa dooran karta baalasha indhaha iyadoo loo eegayo rabitaanka macaamiisha. Taageerayaasha horay loo sii diyaariyey ayaa sidoo kale loo adeegsan karaa taageerayaasha caadiga ah si loo abuuro xirmooyin isku dhafan.
Ujeeddo: Ku habboon indhashareerka. Indhashareerkaan beenta ah waxaa inta badan adeegsada fannaaniinta indhaha, oo leh qaar ka mid ah aaladaha fidinta baalasha, sida tweezers, xabagta darajada caafimaadka, suufka jelka, baalasha indhaha, usha mascara, iwm.
Qalab: Indhashareerkaan waxaa laga sameeyay PBT madow, polybutylene terephthalate, kaas oo u adkaysta sida polyester, wuxuuna u adkeysan karaa heerkulka sare iyo dareeraha kala duwan (kareemka ama nadiifiyaha). Aad bay u jilicsan yihiin oo waa u fudud yihiin, sida indhashareerkaaga oo kale. Intaas waxaa dheer, waa maaddo bey'adda u fiican.
Hore: Calaamadda Gaarka ah Indhashareerrada Been Abuurka leh ee leh Eyeliner Magnetic
Xiga: Kordhi Calaamadda Gaarka ah ee Fidinta Mink -ka ee Farshaxanka ah ee Qarsoodi ah
Codsashada Baalasha Beenta ah
Iibiyeyaasha Ballaarinta Indhaha
fidinta baalasha indhaha ee gaarka ah
Habee Calaamadda Gaarka ah ee Shaqsiga Fa ...
jeedal mink, Jeexa indhaha, Kordhinta Indhaha, Iibiyeyaasha Indhaha, dibinta, indho -dejiye,